सरकार, छोरीहरूको आत्मसम्मानमा आगो नलगाऊ ! – सप्तरंगी एफ एम
Home / ताजा समाचार / सरकार, छोरीहरूको आत्मसम्मानमा आगो नलगाऊ !
राती अबेर सम्म निद्रा पर्दैन । अर्बौं जोगाउन लागिपरेको एक मान्छेको आगो जस्तो बोलीले पोल्छ ।
आफ्नो महत्वकांक्षा पुरा गर्न ऊ जे पनि बोलिरहेछ । सत्याग्रहीलाई र नेपाली छोरीहरूलाई ।
बिहान उठ्छु। सामाजिक सञ्जाल खोल्न खोज्दिन । मेरा लागि अस्पतालमा भोकै लडेको मानिसको अनुहार आँखाभरि नाच्छ । म जस्तै मान्छेका लागि लडेको मान्छेलाई अवहेलना गर्छ सरकार । आफ्नो अर्बौं जोगाउन लागि परेका मान्छेका लागि अभिभावक भएर बसेको छ ऊ । उसको हेपाहा रवैयाले म गल्छु ।
मन भुलाउन खोज्छु । फूलको हाँसोमा । मलाई किन फूल पनि रोए जस्तो लाग्छ ।
फेरि समाचार चहार्छु । कानुनमन्त्री म जस्तै छोरीहरूको इज्जत सरेआम उतार्दै छन् । म छट्पट्टिन्छु । सरकारको मान्छेले मेरो आत्मसम्मानमा तेजाब छर्यो । सरकार मलाई पोल्यो, मलाई पोल्यो । हाँस्न नसकेको फूलको हाँसो मेरो छातीमा दुख्यो ।
महिला सहभागिताको सवाल मेरो प्रधानमन्त्रीलाई ट्याउँट्याउँ किन लाग्यो ? अचम्मै परेथेँ म । उनका मान्छेहरूको अट्टहास सुनेपछि गलेँ म । मेरो देशको अभिभावक कोसँग संगत गर्छ र घन्टौं के कुरा गरेर बिताउँछ ? कस्तो भाव, मन मस्तिकमा लिएर फर्कन्छ ?
एकपछि अर्को उनीहरूका ट्याउँट्याउँले धेरै कुरा भन्दैछ । मलाई लाजले पनि पोलेको छ यतिखेर ।
सडक छेउमा पाँच बिघा जमिन र भित्र केही बिघा जमिन भएको मान्छे कसरी केही वर्षमै अर्बौंको मालिक हुन्छ ? कसरी बैंकहरूले उसलाई सयौं करोडको ऋण पत्याउँछन् ? यो त खोज्दै गरौंला । यी मान्छेहरू आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्न हामी छोरीहरूको इज्ज्तमा आगो किन लाउँदैछन् ? त्यो त आजै खोज्न पर्छ । अहिले नै खोज्न पर्छ ।
राष्ट्रका अभिभावकका नातिले भने, ‘बंगलादेश पढ्न गएका केटाहरू पाँच वर्षमै पढाई सकेर आँउछन् । केटीहरूलाई प्रोफेसरले दास बनाएर करणी गरेर राख्छन् ।’ उही खुबीमा पढ्न जाने छोरीहरू कसैसँग सम्बन्ध नराखी सर्टिफिकेट हासिल गर्दैनन् भन्न सक्ने यो मानिस को हो ? कसको आँटले यो मान्छेले यति मनपरि बोल्यो ?
यो मानिसको बोली बाहिर आएपछि चौतर्फी विरोध भयो । बंगलादेशमा पढ्न गएका विद्यार्थीले आपत्ति जनाए । यो सबै जग जाहेर छ । सरकारका मन्त्री सामाजिक सञ्जालमा अन्य विषयमा स्टाटस लेख्दै बसेका छन् । यो कुरा उनीहरूले देखेनन् ? देखेपछि प्रधानमन्त्रीलाई भनेनन् ? भन्ने आँट गरेनन् वा भने पनि हठी प्रधानमन्त्रीले सुनेनन् ?
हैन भने तुरुन्तै कानुनमन्त्रीको अर्को घिनलाग्दो टिप्पणी किन आयो ? पढ्न गएका छोरीबारे कानुनमन्त्रीले भने ‘मैले सुनेको छु बंगलादेशमा पढ्न गएका हाम्रा चेलीहरूले सर्टिफिकेट पाउन कुनै न कुनै रुपमा आफूलाई बेच्नुपर्छ ।’
यो भनेको के हो ? कसले कतिमा आफूलाई बेचे ? हामीलाई एक-एक केस र एक-एक रेट चाहियो, पूरै कारण र प्रमाणसहित । रातदिन हिंसामा परेका छोरीचेलीलाई न्याय दिन नसक्ने, पढ्न गएका विद्यार्थीको तेजोवध गरी आफ्नो अभिलाषा पूरा गर्न अघि सर्ने यो कस्तो अभिलाषा ? धत !
यस्तो तल्लोस्तरको सोच भएको मान्छेले बाध्यतामा देह व्यापार गरेर परिवार पालेका महिलाबारे के सोच्लान् ? उनीहरूको अप्ठयारोमा कति खिल्ली गर्लान्? सम्झेर काँप छुट्छ ।
सरकारसँग अरु सबै नैतिक बल सकिएको हो ? नागरिकलाई चित्त बुझाउन सक्ने सबै ‘लजिक’ सकिएको हो ? छोरीहरूको इज्जत उतार्ने स्तरको विक्षिप्तता केको संकेत हो ?
हस्तिनापुर राज्य पाउन तिलमिलाएको दूर्योधनको वशमा परे धृतराष्ट्र । सकुनीले जाल बुन्यो । कौरवहरू जागे । भारी सभामा द्रौपदीको वस्त्र उतारियो । धृतराष्ट्र त पुत्र मोहले निरीह थिए । दूर्योधनको पापकर्म थाहा पाएर छट्पटिएका पनि थिए । महाभारतका भिष्म पितामहलाई पनि नुनको वशमा पारेर आफैंतिर लग्यो दूर्योधनले । भिष्म पितामह बाणको ओछ्यानमा सुते ।
तर, नातिको मोहमा परेका केपी ओली त उनकै बोलीमा बोली मिलाउँछन् । योभन्दा निराशा दिने विषय यतिखेर अर्को छैन । गोविन्द केसी अपमान र तिरस्कारको बाणको ओछ्यानमा पल्टेका छन् । कलियुगको दूर्योधन प्रसाईंको नुनको सोझो उनले गर्नु पर्ने छैन धन्न ! हाम्रो आश यतिमा अड्केको छ ।
यही एउटा कुराले लाग्छ हस्तिनापुर खरानी भएजस्तो मेरो देश खरानी हुने छैन । उनको खाली पेटमा दौडने हावाको गतिसँगै हाम्रो धड्कन चलेको छ यतिखेर । कहिले तेज, कहिले धीमा, कहिले होला जस्तो हुन्छ, ठप्प ।
म जस्तो मान्छे साना बिमार हुँदा अस्पाताल जान्न । ठूलो बिरामी परे कसरी जाँउला ? करोडौं रुपैयाँ छैन । जीवनरक्षा भन्दै कागज समातेर सडक चहार्न सक्दिनँ । धेरै राजनीति बुझ्दिनँ । यही कारण म डाक्टर केसीको साथमा छु । उनलाई अपमानले गिराएर, कुनै हालतमा आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्न लागिपरेको हर कोहीको विपक्षमा छु ।
हरेक व्यक्तिसँग लडेर सकिँदैन । तर सरकारको कानुनमन्त्रीले यो हदसम्म गिरेको अभिव्यक्ति कसरी दिन सके ? त्यो हाम्रो चासोको कुरा हो । यो यसै छोड्ने विषय होइन । कहाँबाट प्राप्त भयो उनलाई त्यो दुस्साहस ? प्रसाईंले बोलेका कुराले प्रधानमन्त्रीलाई आपत्ति नभएको देखेर होइन ? हाम्रा प्रधानमन्त्री महाभारतका धृतराष्ट्र जस्तो दुःखी हुँदै चुप लागेर बस्दैनन् । ठाँउठाँउमा उनका सेनालाई उक्साउने छुद्र वचन बोल्दै हिँड्छन् । यसैको परिणाम प्रसाईं र कानुनमन्त्रीको हिलो जस्तो बोली हो ।
बोल्न यिनीहरू बोलिरहेछन् तर तुजुकको श्रोत के हो ? प्रधानमन्त्रीको हेपाहा रवैया र बाँकी मन्त्रीहरूले थपेको मौनताको घिउ ? यही हो यी मानिसहरुको ताकतको श्रोत ? यसरी दन्ककेको आगोमा खरानी भएका आफ्ना आशा हेरेर टोलाउने हामी नागरिक । प्रधानमन्त्रीको नाति भनिएको मान्छे र उहाँको मन्त्रीले आकाशमा फर्केर थुकेका छन् । छिटा सरकारको मुखभरि देखिएको छ ।
म यो सरकारले बाटोभरि थुपारेको फोहोरको गन्ध हत्केलाले छोप्दै हिँड्छु । र, सोच्छु मेरो खुट्टामा लागेको हिलो त म पखाल्छु । तर यतिखेर हामी सबै छोरीहरूको आत्मसम्मानमा सरकारको मान्छेले छ्यापेको हिलो उसैले पखाल्नु पर्छ । यो अपमानको जवाफ आजको आजै चाहिन्छ । ढिला नगरी यो सरकारले दुई कुरा गरोस् :
एक- प्रधानमन्त्रीले माफी मागून् ।
दुई- उनले कानुनमन्त्रीको राजीनामा मागून् ।
यो यूगमा यो नीचपन सह्य छैन । नदीमा होमिएकी योगमायादेखि दूधेबालक छोडेर खाडी मुलुक गएकी फूलमायासम्मको रगत-पसिनाले यो देशको माटो भिजेको छ । कुनै पनि शक्तिको आडमा मैमत्ता भएर बरबराउँदै हिँड्ने महिसासुरहरूलाई हामी त्यसै छोड्दैनौं ।
हेक्का राख सरकार ! आवश्यकताको पिरामिडमा आत्मसम्मान सबैभन्दा माथि हुन्छ । छोरीहरूको आत्मसम्मानमा आगो नझोस । तिम्रो अभिमानको लंका खरानी हुन सक्छ ।
साभार : सेतोपाटि अनलाइन बाट
Previous: पुष्प –धीरेन्द्र स्मृति प्रतिष्ठानद्वारा बृक्षारोपण
Next: महिलाको चरित्रमाथि धावा बोल्ने वि. एण्ड. सी. अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक दुर्गा प्रसाईलाई कारबाही माग